Aoka Izay Ny Fampiasàna Ny Fitomboana Ho Fialan-tsiny Handotoana, Hoy Ireo Afrikana Mafana Fo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2014 19:45 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Español, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, Français
Tondradrano mahery niantefa tamin'i Dar es Salaam, Tanzania, taorian'ny rotsak'orana be tsy mahazatra, tsy mahazatra nanenika ny tanan-dehibe renivohitr'i Afrika Atsinanana tamin'ny Aprily 2014. Sary an'i Peter Stanley. Copyright Demotix.
[Ny ankamaroan'ireo rohy dia mankany aminà pejy amin'ny teny Frantsay]
Nandritra ny Andro Maneran-tany Ho an'ny Tontolo Iainana (WED) 2014, nanararaotra io fotoana io ireo mafana fo manerana an'i Afrika mpiaro ny tontolo iainana mba hampitandremana ny fanaovana sorona ny tontolo iainana noho ny fahamaikana hampiroborobo ny fitomboana ara-toekarena. Tsy lalao izay ahazoana tambatra aotra izy ity akory, hoy izy ireo nampitandrina.
Ny lohahevitry ny andro neken'ny Firenena Mikambana ny 5 Jona tamin'ity taona ity dia ‘Ny feonao ampiakarina, fa tsy ny haavon'ny ranomasina‘, izay miompana bebe kokoa amin'ireo nosy firenena miatrika ny fiovaovàn'ny toetrandro. Faritra maro manerana ny tanibe Afrikana no mora iantefan'ny fiovaovàn'ny toetrandro — mitovy daholo na ny tanibe na ireo nosy. Nanazava ny bilaogy newsmada.com avy ao Madagasikara tanatinà lahatsoratra tamin'ny voalohandohan'ity taona ity fa:
Amin'ny fivoaran'ireo tanàna amorontsiraka any Afrika sy any Azia, nariana any ivelan'ny faritra azo onenana, na toerana izay hiterahan'ny fiovaovàn'ny toetrandro loza lehibe indrindra, ireo mponina mahantra indrindra, .
Nataon'ireo mpikaroka any Afrika Mainty ho tena vaindohan-draharaha ny resaka antoka ara-tsakafo, noho ny mety hisian'ny haintany sy ny tondradrano, sy ny vokatry ny fiovaovan'ny endriky ny pitik'orana. Mety hamadika ny 40 ka hatramin'ny 80 isan-jaton'ny tany ho tsy azo ambolena katsaka, ampemby ary sorgho intsony ny haintany sy ny tsy fisian'ny rano any ho any amin'ny taona 2030-2040 any, noho ny fiakaran'ny hafanana eo amin'ny 1.5 ka hatramin'ny 2° C. eo.
Namoaka fandalinana sy lahatsoratra samihafa momba ny tontolo iainana ny Congo Basin Forest Partnership (CBFP) izay hetsika natomboky Sekreteram-panjakana Amerikana teo aloha Colin Powell, nandritra ny taona. Ny volana Martsa tamin'ny taona 2014, talohan'ny WED, dia namakafaka ny hasarotan'ny fampifandraisana ny fiarovana ny ala sy ireo filàna fampivoarana ny Dr. Denis Sonwa tanatinà lahatsoratra iray ao amin'ny vohikalan'ny CBFP :
Mifanohitra amin'ireo fijerin'ny tany mandroso, toa hita ho fahavalo ny fivoarana sy ny fiarovana any amin'ireo tany andalam-pandrosoana. Toa tsy mifanaraka mihitsy amin'ny ala ny famokarana ara-pambolena mahery vaika. Araka ny tatitra farany nataon'ny Banky Iraisam-pirenena, hiova ireo fepetra sasantsasany (halavirana, hakelin'ny famatsiana sy fampiasam-bola eo amin'ny sehatry ny fambolena, hakelin'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany, hakelin'ny fanjifàna angovo isan-tokatrano,sns.) any aoriana any, izay nandray anjara tanatin'ny fihazonana ny fahasamihafan'ny zavamananaina sy ny fanangonana ny karbônina an'ala ao Afrika Afovoana, ka mety hiteraka ny fitomboan'ny fanapahana hazo. Raha tsy misy ny fandavan-tena goavana na fiovàna ifotony, toy ny hoe fandehanana mihoatra ny sehatry ny fahasamihafan'ny zavamananaina mba hiarovana izany, dia toa tsy hisy vokany ireo ezaka amin'izao fotoana.
Any Maoritania, nanolotra lahatsary ho an'ny WED miaraka amin'ny tononkira an-tsary nataon'i Frederic Bacuez, ary navoaka tao amin'ny ornithondar.blogspot.fr i Malouma, mpihira sady mafana fo mpiaro ny zon'olombelona. Mihiry izy hoe:
‘Ndeha hatsahatra ny famonoana / ‘Ndeha hatsahatra ny fandotoana / Ny fampiasàna ny fitomboana ho fialan-tsiny / Moa ve hisy mpamonjy? / Ny lanitra , mpiahy anareo / Ary ny tany, reninareo / Ireo zava-maniry, anabavinareo / Ary ny rano, loharanonareo / Ary Ry namana! / Arovy ny zavaboary
Nandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny fahafahana miantoka ny fahampian-tsakafon'ny tena sy ny fiovaovan'ny toetrandro I Raphael Kafando ao amin'ny bilaogy cnpress-zongo.ning.com, izay mampitaha ny hevitry ny toekarena maintso sy ireo zava-misy marina ao amin'ny fireneny ao Burkina Faso:
Anatinà firenena iray izay mbola laharam-pahamehana ny fahafahana miantoka ny fahampian-tsakafon'ny tena, ka mbola eo ampanombohana foana ny resaka indostria ary misarika ireo mpampiasa vola fatratra, ny tontolo iainana ve no voalohany ivakiana loha? Anatinà firenena iray izay handraisana ny fivelaran'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ho mana avy any an-danitra, sy ny fametrahana ho lahara-pahamehana ny fanomezana asa ho an'ireo tsy an'asa tsy an-kijery akory ny fahalotoana aterak'ireo orinasa ireo, dia tena afaka miresaka momba ny toekarena maintso marina ve isika?
Nanoratra fahatsiarovana lalina ho an'ny Filoha lefitr'i Amerika teo aloha Al Gore i Julien Dembele avy any Senegal, noho ny ‘hetsi-panentanana manokana’ nataony ho an'ny tontolo iainana. Nanoratra lahatsoratra tamin'ny teny frantsay ihany koa i Dembele, mitondra ny lohateny hoe ‘Antony 10 Lehibe Tokony Hiarovana Ny Tontolo Iainana‘ ary milaza fa:
Ny tontolo iainana madio dia mira fahasalamana tsara […] Ny taona 2003, nitatitra ny OMS fa 21%-n'ireo aretin'olona no nifandray mivantana amin'ny tontolo iainana. Antony lehibe telo no hita fa mahatonga eo amin'ny telo ampahefatry ny aretina sy fahasalamana marefo vokatry ny tontolo iainana. Ireto avy izany- ny rano, ny fanadiovana sy ny fitandremam-pahasalamana – ny fahalotoan'ny rivotra iainana ao an-tokatrano – ny faharatràna ara-batana. Afaka mampihena lehibe ny aretina mifandray mivantana na ankolaka amin'ny tontolo iainana ny fandraisana andraikitra amin'ireo antony telo ireo.
Nanoratra taratasy fanoherana nalefa ho an'ny talen'ny Fahitalavitra Senegaley (RTS-TV) ihany koa izy taorian'ny nandefasan'izany dokambarotra iray mombanà famonoana biby kely hita ho mitera-doza ho an'ny olombelona.
Efa hita ho mihamitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana ao Afrika. Saingy midika ve izany hoe hiala amin'ny fomba ratsiny ireo firenena ireo mba hananana ho avy madio sy ara-pahasalamana kokoa?